Rehefa matory ianao dia zava-dehibe kokoa noho ny hafirianao
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Rehefa matory ianao dia zava-dehibe kokoa noho ny hafirianao
Ny mpikaroka ao amin'ny ZOE, orinasa iray momba ny fahasalamana, miaraka amin'ny ekipa iraisam-pirenena momba ny torimaso sy ny metabolisma malaza eran-tany avy any UK, Etazonia, Soeda, Italia, ary Espaina, dia nahita fa ny fivilian-dàlana amin'ny fanao mahazatra amin'ny torimaso (izany hoe, manana tsy fahita firy). alina), ary koa ny fatoriana taty aoriana, amin'ny ankapobeny, dia mifandray amin'ny fatran'ny glucose ao amin'ny ra ho an'ny sakafo maraina ny ampitso maraina, izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny olona iray sy ny lanjany.
Ireo fikarohana farany ireo dia ampahany amin'ny ZOE PREDICT, ny fikarohana siantifika momba ny sakafo lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, ary navoaka androany tao amin'ny gazety Eoropeana malaza, Diabetologia. Amin'ny maha-fandalinana torimaso mivelatra indrindra amin'ny karazany - manodidina ny 10 heny noho ny fandalinana azo ampitahaina - ireo fanambarana miaraka amin'ny teknolojia nomerika vaovaon'ny ZOE ireo dia ahafahan'ny orinasa manolotra torohevitra manokana hanatsarana ny fahasalaman'ny mpikambana sy ny lanjan'ny mpikambana.
• Zava-dehibe amin'ny fandrindrana ny fahasalaman'ny metabolika ny torimaso, ary mety ilaina ny fitambaran'ireo torolalana momba ny torimaso ankapobeny sy manokana kokoa mba ahafahan'ny olona manamaivana ny mety ho aretin'ny metabolika, toy ny diabeta, ny tosidra ambony (hypertension) ary ny matavy loatra.
• ZOE PREDICT no fandalinana lehibe indrindra eran-tany mba hanangonana angona lalina sy amin'ny antsipiriany momba ny torimaso sy ny sakafo. Ity fandalinana manokana momba ny torimaso ity no lehibe indrindra amin'ny fampiasana fepetra tanjona amin'ny torimaso, fanaraha-maso tsy tapaka ny glucose ary fitsapana fanamby metabolika manara-penitra.
• Ny tsy fahampian'ny torimaso amin'ny alina dia misy ifandraisany amin'ny tsy fahampian'ny siramamy ao amin'ny rà amin'ny sakafo maraina ny ampitso maraina, na inona na inona sakafo maraina nofidian'ny olona iray.
• Ny fananana torimaso tsy ara-dalàna isan-kerinandro dia mifandray amin'ny tsy fahampian'ny siramamy ao amin'ny ra, izay mety hitarika olana ara-pahasalamana fohy sy maharitra.
• Ny valin'ity fanadihadiana ity dia mety hampahafantatra ny fomba fiaina hanatsarana ny haavon'ny glucose amin'ny ra aorian'ny sakafo, mifantoka amin'ny fahazarana alohan'ny hatoriana ary mampitombo ny torimaso tsara tsy tapaka.
Ny torimaso tsara dia efa fantatra hatry ny ela ho ampahany fototra amin'ny fomba fiaina ara-pahasalamana. Na dia tsy mazava tsara aza ny fomba mifanaraka amin'ny sakafo sy ny asa ara-batana ny torimaso. Raha ny marina, hitan'ny mpikaroka teo aloha fa ny torimaso ratsy na kely loatra dia mifandray amin'ny fifehezana siramamy ao amin'ny ra amin'ny olona voan'ny diabeta saingy ny halehiben'ny fifandraisana amin'ny olona salama dia tsy fantatra hatramin'izao. Nampiasa angona avy amin'ny fandalinana ZOE PREDICT ny ekipan'ny mpikaroka ZOE, izay nahitana mpilatsaka an-tsitrapo 953 salama no narahina nandritra ny roa herinandro. Nandritra izany fotoana izany, nihinana sakafo manara-penitra ny mpandray anjara, ary nanao gliokaozy amin'ny rà sy ny fanaraha-maso ny hetsika mba handrefesana ny valin'ny siramamy ao amin'ny rà sy ny torimasony (fanamarihana: ny torimaso dia tsy natao ho an'ny fanandramana).
Ny mpahay siansa dia nandrefy ny faharetan'ny totalin'ny fotoana natory ny mpandray anjara ka hatramin'ny fotoana nifohany, ary koa ny kalitaon'ny torimasony. Avy eo izy ireo dia nandinika ny fomba torimason'ny olona nandritra ny tapa-bolana, ary nampitaha azy ireo tamin'ny valin'ny siramamy ao amin'ny rany amin'ny sakafo misy gliosida, proteinina ary tavy manokana.
Mampifandray ireo teboka
Tamin'ny alalan'ny fikarohana nataon'izy ireo, ny mpahay siansa dia nahita fa amin'ny mpandray anjara rehetra, ny matory aloha kokoa fa tsy ny matory lava kokoa dia mety ho tsara kokoa ho an'ny fahasalaman'ny metabolika - fanjakana iray izay refesina amin'ny andian-javatra mampiseho ny fahasalamanao ankehitriny, ary koa mety ho voan'ny aretina mitaiza mafy ianao any aoriana any. Ireo mpandray anjara izay natory taty aoriana dia niharatsy kokoa ny valin'ny siramamy amin'ny sakafo maraina ny ampitson'iny, na dia tara aza izy ireo, raha ampitahaina amin'ny olona izay natory nandritra ny fotoana mitovy fa natory aloha ny hariva.
Fanampin'izany, ny angon-drakitra dia nanambara fa ny fanakorontanana ny torimaso amin'ny alina dia misy ifandraisany amin'ny valin'ny siramamy ao amin'ny rà tsy dia mahasalama amin'ny sakafo maraina ny ampitso. Raha tsy izany, amin'ny lafiny tsirairay, ny fifikirana amin'ny fahazarana matory mahazatra sy ny fisorohana ny alina tsy mahazatra dia nitarika ho amin'ny valin'ny siramamy ao amin'ny ra amin'ny sakafo maraina ny ampitso maraina. Zava-dehibe izany satria ny valin-kafatra tsy ara-pahasalamana aorian'ny sakafo dia mifamatotra amin'ny mety ho voan'ny diabeta karazany 2 na aretim-po.
Fanampin'izany, ny fananana torimaso tsy ara-dalàna isan-kerinandro miaraka amin'ny ora fatoriana tsy mifanaraka sy ny faharetan'ny torimaso miovaova dia mifandray amin'ny fifehezana siramamy ambany kokoa. Mety hanampy amin'ny fanazavana ny 'jetlag ara-tsosialy' izany, izay entin'ny fiovan'ny fandaharam-patoriana izay iainan'ny olona maro amin'ny andro tsy iasana, raha oharina amin'ny andro fiasana, ary hita fa mifandray amin'ny fahasalamana ratsy kokoa, ny toe-tsaina ratsy kokoa ary ny fitomboana. torimaso sy havizanana.
Farany, hitan'ny ekipa fa ny sakafo maraina matavy be sy be gliosida dia nitarika ho amin'ny valin-kafatra voafehy tsara kokoa noho ny fisotroana siramamy fotsiny. Ity fikarohana ity dia mety ho manan-danja indrindra ho an'ireo izay mitodika amin'ny zava-pisotro misy angovo na vatomamy ho an'ny sakafo maraina ho pick-me-up aorian'ny alina. Raha averina tsy tapaka, ny valin'ny glucose amin'ny ra dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana amin'ny metabolika toy ny diabeta, matavy loatra ary aretim-po. Noho izany, ny fitazonana ny tahan'ny siramamy ao amin'ny ra dia ampahany manan-danja amin'ny fijanonana ho salama ary singa fototra amin'ny programa ZOE noho izany antony izany.
Ireo vokatra ireo dia manasongadina ny anjara asa lehibe ananan'ny torimaso amin'ny fahasalaman'ny olona iray sy ny fahafahany manatratra fomba fiaina ara-pahasalamana, ary koa ny maha-zava-dehibe ny fahazoana torimaso ampy sy tsara ary ny lanjan'ny famonoana ny jiro aloha kokoa raha azo atao.
Mpikaroka mpitarika ao amin'ny fandinihana ary mpikambana ao amin'ny ZOE Scientific Advisory Board, Profesora Paul Franks avy ao amin'ny Oniversiten'i Lund any Soeda, dia nilaza hoe: "Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​na ny faharetan'ny torimaso sy ny fotoana dia azo ovaina, noho izany ny tsy fahampian-torimaso, na ny fanakorontanana ny fandaharam-potoanan'ny torimaso. anjarantsika ny miova. Nanampy i Franks hoe: "Ny mindrana amin'ny fotoana fifohazanao sy ny fampindramam-bola amin'ny torimaso dia tsy atao raha tsy misy zanabola. Na dia indray alina monja aza dia misy fiantraikany amin’ny fomba fiasan’ny vatantsika ny sakafo sy ny fifehezana ny tahan’ny siramamy ao amin’ny ra.”
Dr. Sarah Berry, mpamaky momba ny siansa momba ny sakafo ao amin'ny Departemantan'ny Siansa momba ny sakafo ao amin'ny King's College, London, ary ny Lead Nutritional Scientist ao amin'ny ZOE, dia niaiky fa "Ny torimaso dia andry lehibe amin'ny fahasalamana miaraka amin'ny sakafo, ny asa ara-batana ary ny fahasalamana ara-tsaina. Tsy ampy torimaso anefa ny olona iray amin'ny telo. Ny olona tsy ampy torimaso dia manana risika 40 isan-jato ambony ho matavy loatra ary atahorana ho voan'ny aretim-po sy diabeta. Ireo olona ireo ihany no mihinana kaloria bebe kokoa, misafidy tsakitsaky tsy mahasalama, tsy dia misy karazany firy amin'ny sakafony ary manana kalitaon'ny sakafo tsy misy fibre sy voankazo ary legioma. Raha fintinina, ny fandinihanay dia mampiseho fa ny torimaso dia tokony hisarika ny saina bebe kokoa. "
Tim Spector, mpiara-manorina ny ZOE sy profesora momba ny epidemiology génétique ao amin'ny King's College London, dia nanamarika hoe: "Sahala amin'ny sakafo, tsy misy fomba iray mifanentana amin'ny rehetra mba hanoro ny ora matoriantsika. Saingy, izao dia azontsika atao ny manamafy fa misy fomba fiasa atolotra ny fotoana sy ny fomba hatoriantsika. ” Nanohy ny Spector hoe: "Mba hahatsapan'ny olona hery sy fahatokisana amin'ny fahafahany mandray andraikitra amin'ny fahasalamany, dia zava-dehibe ny fanabeazana. Ny fikarohana manara-penitra ataonay miaraka amin'ny fomba fijerin'ny ZOE manokana dia manampy anay hihaona amin'ny olona na aiza na aiza misy azy amin'ny diany ary manome azy ireo tondrozotra tohanan'ny siansa mba hahatratrarana ny fiovana sy hiroborobo.
Torohevitra momba ny torimaso 5 tohanan'ny siansa hanohanana ny fahasalaman'ny metabolika
• Mandrindra ny tsy fitovian-kevitra: Mamorona fahazarana matory izay miasa ary mifikitra amin'izany mandritra ny herinandro.
• Manaova famandrihana aloha…amin'ny fandrianao: Matory aloha isan'alina fa tsy mandry ny ampitso maraina.
• Mametraha toe-po: Ataovy izay mangina, maizina ary mangatsiatsiaka ny efitrano fatoriana, aza mihinana sy misotro amin'ny alina, ary manaova fotoana ampy hialana sasatra sy hialana sasatra alohan'ny hidona amin'ny mololo.
• Atombohy tsara ny andro: Ny vokatra azo avy amin'ny ZOE PREDICT dia mampiseho fa ny zavatra hohanin'ny olona iray dia manan-danja toy ny rehefa mihinana. Koa satria ny fiantraikan'ny sakafo dia miovaova be eo amin'ny tsirairay, makà sakafo maraina mahasalama ho an'ny vatanao (eritrereto hoe: voankazo sy legioma) fa tsy sakafo maraina be karbônina ho fampivoarana angovo tsara indrindra amin'ny maraina.
• Fantaro ny Vatanao: Manaova fitsapana feno hamantarana ny fihanaky ny bakteria "tsara" sy "ratsy" ao amin'ny tsinay izay mifandray amin'ny fahasalamana metabolika, ary koa ny siramamy ao amin'ny rà sy ny tavy amin'ny rà amin'ny sakafo mba hahafahanao mifehy ny vatanao. fahasalamana manokana.